China Ski Bag China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ski Bag - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-Ski Bag)
Amandla Wokunikezela: 10000 Piece/Pieces per Month
Isikhwama Sasemanzini Sangaphandle Sesiqhingi Sangaphandle Lapho ushushuluza, udinga isikhwama se-ski ukugcina imishini yakho yokushushuluza yomile futhi ihlelwe kahle. Lesi sikhwama ski semidlalo sasebusika yisinqumo esihle kunazo zonke. Lesi sikhwama ski silingana kakhulu ne-ski okufika ku-200 cm. Yakhelwe...
Isikhwama Esiphezulu Sokuqina Kwemanzi Esishubile
Isikhwama Esiphezulu Sokuqina Kwemanzi Esishubile Ukusetshenziswa Kakhulu - Isikhwama ski esigoqiwe silingana kakhulu nama-skis afinyelela ku-160 cm. Imichilo yamahlombe eguqukayo yenza kube kufanelekile kubantu abahlukahlukene kanye nabantu abaphakeme ngokwehlukile. Isikhwama Sama-Ski Esigotshwe - Kuhlanganiswe...
Izikhwama ze-Snowboard Ski Sports
Lesi sikhwama se-ski esiwusizo kakhulu esivikela i-skis yakho kusuka ekubhalweni nasekusikeni futhi ivikele imoto emiphumeleni yeqhwa neqhwa. Leli gumbi eligobeke ngokuphelele futhi ligcwele i-tarpaulin. Nge-zip yobude obugcwele, kulula ukulayisha futhi ulayishe. Le Ski Backpack ikhetheke kakhulu kulabo abahlela...
Isikhwama esikhwameni sePole Ski Pole
BHEKA ISKI YAKHO NGOKULULA - Jabulela ukuhamba okulula okulula ngesikhwama se- ski - akusekho ukuthwalisa nzima kwesikhumba sakho! LUNGISELELA NGALOLUNYE LESITOLO - Indwangu ye-nylon engavikeleki namanzi izovikela ukuthi i- Ski Backpack isetshenziswe iminyaka eminingi kunoma yisiphi isimo sezulu. IZIMPAHLA...
Isikhwama sethu se- S ki yisisombululo esifanele sokuxazulula izinkinga zakho ze-skis, isitoreji ski nezinkinga zokuthumela. Usayizi ojwayelekile walesi sikhwama se-ski ngu-7.5''x 5''x 75 '', ene-zipper ebude obugcwele yokubeka kahle i-skis. I- Ski Backpack yenziwa nge-polyester engu-600D futhi...
Lapho uhamba ezintabeni nasezindaweni zokungcebeleka, isikhwama se- ski singazixazulula ngokuphelele izinkinga zakho zokuthwala zezesekeli ze- ski . Isibambo esigoqiwe ukuze kube lula kuwe. Ukuxhumeka kwewebhu kunganamathiselwa kwiSki Backpack ukuze kunamathiselwe kalula ehlombe. Izikhwama zethu ze-Alpine ski zenziwe...
I-Custom Outdoor Sport Ski Bag Waterproof
Udinga ukwenza ngokwezifiso ibhulukwe lokushushuluza lezinto zokushushuluza ezinjenge-skis, izigaxa ze-ski, isigqoko ski? Sinezifundiswa ezinolwazi lapha zokukusebenzela, sicela ukhululeke ukusithumela kubuza kwakho. Singahlangabezana nezidingo zakho kuzo zonke izigaba zemikhiqizo yesikhwama se- ski - kusuka...
Isikhungo Sokuhamba Sabadala Esiphezulu se-Alpine Ski Boot
Isikhungo Sokuhamba Sabadala Esiphezulu se-Alpine Ski Boot Isikhwama esisezingeni eliphakeme seSki Boot: Beka amabhuzu akho e-ski, ijakhethi, isigqoko kanye neminye imishini yokushushuluza bese uqala ukuhamba kwakho nge-ski. Izikhwama Ze-Ski Ezinezintambo Ezicasulayo: Lapho imithambeka iba inkungu noma i-twilight,...
Izikhwama Zama-Ski Esiphathekayo Amanzi Esisekelo se-Waterproof Ski Boot
Isikhala esikhulu - Isikhwama Sethu Samaqhuzu Amabhuthi anomthamo owanele wokuvikela nokugcina amabhuzu akho e-ski, amagogo, izigqoko zokuvikela ukushibilika nokunye. Yenziwe kahle futhi ayitholi manzi - Le Ski-Boot Isikhwama senziwe ngezinto eziqinile, ezisezingeni eliphakeme nefilimu engenawo amanzi polyethylene...
I-Fully Padded single Ski Travel Bag Iyathengiswa
I-Fully Padded single Ski Travel Bag Iyathengiswa Isikhwama sokuhamba nge-ski sivikela igiya lakho le-ski futhi siligcina esikhwameni esikhulu ski. Yonke indawo yokushushuluza i-ski isheleza ngokuphelele ukusiza ukuvikela ama-skis akho ezingoxini, ezilingweni nasezikhungweni zomoya, ngebhasi noma ekuhambeni kwezimoto....
I-Transpack Ski Boot Bag Backpack
I-Transpack Ski Boot Bag Backpack Isikhwama sasemuva se-Hxw boot isisetshenziswa esidingekayo skiing sangaphandle. Isikhwama sangaphansi se-lightweight ski boot esikhwama sibeka kalula amabhuzu we-alpine ski, isigqoko, isigqoko kanye nengubo. Ihlanganiswe ngokuqinile eyenziwe ngamakamelo futhi ifaka ukuceba...
I-Backpackry Ski Backingack Yezinsimbi Zasendlini
I-Backpackry Ski Backingack Yezinsimbi Zasendlini Isikhwama Sokuphakama Kwekhasi le-High: Isikhwama esindayo sempahla, ilungele ukugcina ibhuthini, isigqoko, izigqoko, ijacket, neminye imishini yokuhamba ngeqhwa noma ngegiya lokuhamba. Isikhala Sokubeka Esibumbekayo: Amaphakethi ebhuthini lokungena angena ngaphakathi;...
I-Roller Ski Bag Yezokuhamba Komoya
I-Roller Ski Bag Yezokuhamba Komoya 【I-Skiing Ready】 - Isikhwama Sokuhamba NgeSki ilungele ukushushuluza nokuhamba ngeqhwa, okuyinto enhle ngokugcina amabhuzu akho, amajakethi, izigqoko nezigqoko zeSki nezinye izinto ozidingayo. 【I-Waterproof, Thick & Sturdy】 - Ukwakhiwa okuqinisiwe ngokugxisha okuphindwe kabili,...
Isikhwama semithwalo ye-Atomic Nordic Ski Boot
Isikhwama semithwalo ye-Atomic Nordic Ski Boot Gcina igiya lakho lihlelekile. Isikhwama sethu semithwalo ye-ski singabamba amabhangqa e-1 e-ski, futhi sikhona isikhala esanele samagilavu ​​akho, izigqoko, izigaxa, njll. Kungathwalwa noma kuthwelwe emzimbeni ngebhande lamahlombe. Iphakethe elincanyana ngaphandle...
Isikhwama Sokuhweba se-Atomic Ski Boot esidayiswayo
Isikhwama Sokuhweba se-Atomic Ski Boot esidayiswayo Indwangu Engaguquki : Lesi sikhwama se-athomu ski senziwe ngezinto ezingama-600 zikaDaniel ezingamanzi. Ukuhlanganiswa kwayo okungangeni manzi kusiza imishini yakho ukuthi iqhubeke yomile lapho lina futhi lina ngesimo sezulu esibi Ikhono : Kunegumbi elikhulu elikhulu...
I-600D Waterproof Padded Snowboard Bag Ski Bag
I-600D Waterproof Padded Snowboard Bag Ski Bag Isikhwama Seqhwa Samaqhwa Esigcwele - Lesi sikhwama sebhodi eqhweni eligcwele ligada sivikela izisetshenziswa zakho ezibalulekile ze-skis nezikebhe ekushayaneni nemvula. Isikhwama esisheshayo esisheshayo silinganisa amasentimitha angama-80, singathwala iskis eside, futhi...
I-Wholesale Hiking Trekking Grip Nordic Ski Pole Grip
Ukupakisha: singenza noma yikuphi ukufakwa njengesicelo sakho, iphakethe elijwayelekile lefekthri.
I-Wholesale Hiking Trekking Grip Nordic Ski Pole Grip Ubunzima Obumnandi - Imidlalo yethu ethola umswakama ethola umswakama i-ergonomic Hiking Trekking ifana nesimo sesandla sakho futhi yandise induduzo emazingeni okushisa ashubisa umnkantsha! Ukubamba kuzofanela igilavu, futhi intambo ehlanganisiwe isiza ukugwema...
I-Ski Strap Carriers Snowboard Fonting Belt Ukwehla kweqhwa leqhwa alilula, liqinile futhi kulula ukuligoqa futhi ukuligcina ephaketheni noma esikhwameni, ukuze ukwazi ukuthwala i-skis yakho nawe. Leashboard ehlombe leqhwa yenziwe ngezinto eziqinile ze-nylon, ezanele ukusekela izingxobo zakho ze-skis neziski isikhathi...
I-100% Nylon EVA Hook Loop Ski Pass Holder
Ukupakisha: I-20pcs / polybag, 500pcs / ibhokisi.
I-100% Nylon EVA Hook Loop Ski Pass Holder Yenziwe kusuka ku-100% i-nylon ne-EVA, lesi siphequluli ski ski sivimba isisekelo ekuhlikiweni nasekukhoneni, sivikele phansi kwesikhumba sakho futhi sibabambe ndawonye njengoba ubaphatha. Isiphathi sokudlula kwe-ski kulula ukufaka nokuhlakaza. Amasayizi ongeziwe amukelwa...
Ski Bag ski bag I-600D Ski Bag ISki Bag Padded ISki Strap I-Ski Backpack I-Snow Ski Band I-Ski Boot Bag Pack